Tag: u doodista bulshada | Martech Zone
Tag: u doodista bulshada
Khamiis, Juun 19, 2014 Arbacada, Juun 18, 2014 Douglas Karr
Adeegga macaamiisha IS suuqgeynta. Mar labaad ayaan dhihi doonaa service adeegga macaamiisha WAA suuqgeynta. Sababtoo ah sida aad ula dhaqanto macaamiishaada ayaa looga dallacsiiyaa baraha bulshada, qiimeynta iyo dib u eegista maalin kasta, adeeggaaga macmiil maahan mid tilmaam u ah qanacsanaanta, haynta ama qiimaha macaamiisha. Macaamiishaadu hadda waxay yihiin cudud muhiim u ah dhammaan dadaalada suuqgeyntaada maxaa yeelay si fudud ayey internetka ula wadaagaan. Halka Kooxaha Suuqgeyntu ay ujeedadoodu tahay kordhinta wacyiga calaamadda iyo jiilka hoggaaminta iyada oo la riixayo
Isniin, Maarso 31, 2014 Douglas Karr
Leger Metrics waxay bixisaa barxad si ay uga caawiso shirkaddaada faham wanaagsan oo ku saabsan sida khibradaada macaamiisha ay u wado qanacsanaanta, daacadnimada iyo faa'iidada shirkaddaada oo dhan. Barmaamijka Codka Macaamiisha (VoC) wuxuu ku siinayaa aaladaha lagama maarmaanka u ah soo qabashada jawaab celinta macmiilka astaamahan soo socda: Jawaab celinta Macaamiisha - Ku martiqaad jawaab celinta macaamiisha kuna soo aruuri moobilka, shabakadda, SMS, iyo taleefanka. Warbixinta iyo Falanqaynta - U gudbi fikradaha dadka saxda ah, waqtiga saxda ah